12 Amagumbi aphezulu okubaleka kwihlabathi liphela | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 12 Amagumbi aphezulu okubaleka kwihlabathi liphela
Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Zokuhamba Qeqesha Greece, Train Travel Holland, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Kuyonwabisa, eyoyikisayo, ukusebenzisana, imihlaba engaphantsi komhlaba, okanye izindlu zakudala, i 12 amagumbi okubaleka angcono kwihlabathi, ayizizo ezentliziyo ebuthathaka. Okuphikisanayo, kuphela onesibindi, abadlali beqela abanobuchule kunye nabathandi bephazili baya kuphumelela ekusindiseni umhlaba, nokutyhila iimfihlelo kudala ulibale. Ukuba ucinga ukuba uyifumene into eyenzekayo, emva koko bhukisha enye yezi 12 amagumbi okubaleka angcono kwihlabathi, kwaye uzame ukubetha iingxaki.
1. Igumbi lokuSinda eliShiyekileyo eAmsterdam
Ebizwa emva komcuphi owaziwayo emhlabeni, Igumbi lokubaleka elinesherha lelinye lamagumbi okubaleka anomdla kwihlabathi. KwiSherlocked ungakhetha phakathi 2 amava ahluke kakhulu; Umyili wezakhiwo okanye iVault. Enye yazo 60 imizuzu emide, kwaye owesibini ngulo 80 imizuzu emide, Zombini zilungele iqela le 4 abantu, abazali nolutsha bamkelekile kakhulu.
kunjalo, umahluko ophambili phakathi kwamagumbi okuphuma omabini ngumsebenzi ofanelekileyo. I-Architect iya kuba neyokusombulula iimfihlakalo kwigumbi elitsha ukuze ligcine iimfihlo zehlabathi ezigcinwe kakhulu. Kwelinye icala, iVault kuya kufuneka utshintshe ii-personas zibe ngamasela ebe izinto ezixabisekileyo kwindawo ekhuselekileyo. Uninzi ngaphambi kokuba uzame kwaye wahluleka, kodwa iqela lakho lemigulukudu linokuphumelela kule nto ifihlakeleyo nenamaqhinga. ke, eli gumbi lokubaleka liyajoyina izinto ezizodwa zokwenza eAmsterdam.
2. Baleka ukuzingela kwihlabathi liphela
Igumbi lokubaleka lokubaleka linamasebe kwiindawo ezininzi emhlabeni, ukusuka eNgilani ukuya eSingapore. Ukuba uyazithanda izidalwa ezingaqhelekanga, Amabali eDisney, kunye noAlice, emva koko uya kulithanda eli gumbi lokubaleka kwaye uza kuhamba ngenjongo yokubalekela ukuzingela, kwilizwe ngalinye.
Igumbi lokubaleka lokubaleka linoluhlu lwamagumbi okuphuma, eyahlukileyo kwilizwe ngalinye. EMarseilles, Uya kukhangela abahlobo emva kokuba uHoudini ebenze baphela kwisekisi enkulu, okanye e-UK bancede u-Alice kunye nabahlobo basindise iWonderland. ke, iipuzzle zehlabathi kunye neemfihlakalo zifuna uncedo lwakho kunye nobuchule kwizixeko ezikhulu kwiYurophu naseAsia.
3. I-Enigma Ukufuna eLondon
Ifumaneka eFinsbury, kumgama nje omfutshane ukusuka eLondon Bridge naseThames River, Enigma Ukufuna ukubaleka 3 Imibuzo emangalisayo. Ukuba uhamba nabahlobo, Usapho olunabantwana, okanye isibini sikhangela iindawo ezothusayo, emva koko unokukhetha phakathi kwegumbi lokubaleka elwandle lamanzi anzulu kunye nesigidi seepawundi.
Ukuba ungumkhangeli weadrenaline, mhlawumbi uThelma noLouise olandelayo? emva koko amaqhina kwi-Enigma Quest akulungele. Kwi-Mission Wavebreak uya kusindisa umhlaba, nakwiMillion Pound Heist, Uya kudinga ukudibanisa elona bhaso likhulu kwimbali yanamhlanje. ke, ukuba ucinga unayo into eyenzekayo, ke Inigma Ukufuna igumbi lokuphuma entliziyweni yaseLondon liyilelwe i-epic-imizuzu engama-60 eyenzelwe yona.
4. Iprojekthi yeParadox 2: Igumbi lokubaleka leencwadi eAthens
Ukuba uyigumbi lokubaleka, emva koko iProjekthi yeParadox 2 eAthene lelona thuba ligumbi lokubaleka. Ngokungafaniyo namanye amagumbi okuphuma okumangalisayo emhlabeni, Iprojekthi yeParadox yeProjekthi ihlala kuyo yonke indlu ye-neoclassical eAthene. Kuko oko, ukufuna kwakho kuyasasazeka kumagumbi amaninzi nakwiindlela ezifihlakeleyo kule ndlu ibalaseleyo.
Ngaphezu, Igumbi lokuphuma eVenkile yeencwadi li 200 imizuzu yemishini, enokwahlulwa ngokulula ibe 5-6 amagumbi okuphepha. ke, uya kunandipha okona kulungileyo kuwo onke amazwe, kwaye ngamava egumbi lokubaleka elingenaxabiso. Iseti eyilwe kakuhle kunye neepuzzle, izithuba ezininzi, izinyuko, balindele abafuna ukonwaba ngaphakathi kwivenkile ethengisa iincwadi yokwenene eAthene.
5. UMnu. X Imfihlelo yeNdlu yaseShanghai
Ukuba udiniwe yi izakhiwo eziphakamileyo e Shanghai, Mr. Indlu yephazili ka-X iya kuba likhefu elikhulu ukusuka esixekweni esiphithizelayo. Le ndlu yokubaleka imangalisayo inayo 5 amagumbi, nganye inemfihlelo eyahlukileyo yokusombulula. Uzivalele egumbini iyure, ngaphandle koluvo lomfanekiso omkhulu. Umceli mngeni kukusebenzisa yonke into esegumbini, nditsho nesitalato, ukuzama ukufumana indlela yokuphuma egumbini.
Mr. Amagumbi okuphuma eX agcwele iimfihlakalo kunye nemiceli mngeni. Ngokuchasene namanye amagumbi okubaleka amnandi emhlabeni, Apha iqela lakho liya kudinga ukusebenzisa zonke izivamvo, ukuqaphela, kunye nengqiqo, ukufumana ngokulula indlela yokuphuma egumbini. Mr. X Indlu eyimfihlakalo ikumbindi weBhulorho 8 II, KwiSithili saseHuangpu, apho i-adventure iqala ngqo ukusuka ekungeneni.
6. Amaphenyane okubaleka kunye namagumbi okubaleka e-SOS eDublin
Igumbi elinqabileyo lokuhamba ngeenqanawa kwisixeko saseDublin lelinye lawona aphezulu 10 amagumbi okubaleka ehlabathini. Apha, Kuya kufuneka ubeke onke amandla akho kunye namandla akho kunye kwaye ufumane indlela yokuphuma kwisitya. Kanjalo, Iinqanawa zokubaleka kunye namagumbi e-SOS abekwe kwindawo enkulu, kume ezibukweni laseDublin.
ngoko ke, Igumbi lokubaleka Amaphenyane kunye nee-SOS ngamanye amagumbi okubaleka akhethekileyo emhlabeni. Indlela yokuphuma igcwele iipuzzle, ikhowudi-ukuqhekeka, nokusombulula imfihlakalo. Ukuba igumbi lokubaleka liyinxalenye yokubhiyozela okhethekileyo, inkampani inokulungiselela ukutya ngomnwe ukusuka imivalo ekufuphi kwiDock yomsele.
7. Igumbi lokubaleka eParaPark Budapest
Eyona mfihlakalo inkulu eBudapest ikulindile kwigumbi lokuphuma kwigumbi elingaphantsi eParaPark. Uya kuhla ufumane imikhondo ilele kwigumbi lokuqala lokubaleka eYurophu. Apha, uya kuzifumana ukwindawo yolwaphulo-mthetho, Iincopho zeTwin ziphefumlelwe. ke, zilungiselele ukudlala umcuphi, kwaye uncede iqela lakho ngaphandle kwebhokisi, njengokuba ucinga ngaphandle kwebhokisi, okanye kwigumbi elingaphantsi, leyo into.
Indawo yokwenzakala 95 ikwi-NYC, apho imigulukudu ilwa ezitratweni, kwaye kwehle intlekele. ke, Uya kubizwa ukuba ufumane ukusombulula imikhondo, gcina amaphepha ukuze ufumane isaphuli-mthetho phambi kokuphela kweyure. Ukushwankathela, Igumbi lokubaleka laseParaPark lelabantu abathanda ukomelela kunye nabathandi bamabali olwaphulo-mthetho.
8. Igumbi laseBerlin
Igumbi linalo 4 imisebenzi, nganye 75 imizuzu emide, umngeni ngamnye, kwaye elowo uya kuhamba ngexesha kwenye indawo. Ukuzingela ubuncwane kwiYunivesithi yaseHumboldt, uqeqesho kunye nomzingeli omkhulu wesiporho, okanye ukunceda umphandi omkhulu waseBerlin ukuba abambe uMbulali waseBerlin, kuyacaca ukuba le mishini ayingomdlalo weqonga owoyikayo ngokulula.
ngoko ke, ukhethe umngeni wakho ngononophelo, kwaye uze kakuhle uxhobe ngewits, isinxibo, nentliziyo ekhaliphileyo. Igumbi lokubaleka eBerlin li 2017 Ophumeleleyo weGolden-Lock, yenzelwe ukucela umngeni kulo naliphi na igumbi elithandayo. Ngaphezu, eli gumbi lokubaleka lilulungele ngokupheleleyo uhambo oluya eBerlin, Okwesibini nokwesihlanu.
9. Igumbi lokubaleka kwamangcwaba eParis
Igumbi lokubaleka elingaqhelekanga eParis lelabo bathandiweyo banesibindi. Ukuba awuzange uqaphele kwigama, Igumbi lokubaleka leCathacombs likuthatha kwiinkulungwane ubuyele kwindawo yobumnyama kwihlabathi elingaphantsi komhlaba laseParis. Ngelixa iParis yenye yezona zininzi imizi amahle emhlabeni, Amangcwaba ayo ayinqambi, kwaye abanye baya kuthi yoyike kancinci.
Ngaloo ndlela, ukuba uthatha umngcipheko entliziyweni, kwaye i-goosebumps ayisiyiyo imvakalelo engaqhelekanga, emva koko ubhukhe igumbi lokungcwaba amangcwaba. Ukudlala umdlalo wegumbi lokubaleka apha kuya kuba ngamava amnandi kunye notshintsho olutsha ekutyeleleni iigadi, okanye Ukuthenga ngaphakathi Paris.
10. Igumbi lokubaleka likaHarry Potter ePrague
Igumbi lokubaleka likaHarry Potter ligunya losapho. Ukuhonjiswa kunye neepuzzle zilungele abantwana, ngamanani asebenzisanayo abantwana banokunxibelelana nabo. Ngaphezu, wena nabantwana niyakufumana iiwands zomlingo, ukuze babe namava ehlabathi elikhethekileyo likaHarry Potter.
Igumbi lokubaleka likaHarry Potter ePrague yi 60 imizuzu yemishini. Ngeli lixa lemilingo, Iqela lakho liya kufuna ukufumana izinto zakudala ezintathu ezifihliweyo emfihlakalweni uharry Potter igumbi lokubaleka, Igumbi lokubaleka likaHarry Potter lixesha elimnandi nelonwabisayo kuyo yonke usapho ePrague.
11. Umdlalo wangaphandle wokubaleka eVilla Borghese eRoma
Wonke umntu uya e-Itali ukuze afumane ukutya, Villas, yaye iwayini lendawo. Ngobunewunewu begumbi lokubaleka boyisa umhlaba, Iindawo eziphezulu zase-Italiya ziye zaba ngamagumbi okubaleka amangalisayo. I-Villa Borghese eyothusayo yindawo yokuqala ukuya kwi 2.5 iiyure zokusombulula iphazili. I-villa ligumbi langaphandle lokubaleka apho uya kuba uhambela phambili ukusuka kwinqaku ukuya kwinqaku ngesikhephe.
Igumbi lokubaleka elikhethekileyo liseRoma. ke, xa ugqibile ukuphonononga iColosseum, uya kufumanisa iindawo ezintle ezifihliweyo kwikomkhulu lase-Italiya. Ukushwankathela, I-Villa Borghese lelona gumbi lokubaleka lingaphandle eYurophu. Ngokungafaniyo namagumbi angaphantsi, amathala eencwadi, Kwaye mangcwaba, Apha uya kudibana kwindawo entle kakhulu yase-Italiya.
12. Igumbi lokubaleka elebhu iBunschoten
Iyure ukusuka eAmsterdam, Igumbi lokubaleka laseLaboratri eBunschoten ilifanele ngokupheleleyo idrive okanye uhambo ngololiwe from any location in Europe. IBunschoten inayo 3 amagumbi okubaleka, kodwa iLabhoratri yeyona ilungileyo, kwaye lelinye lamagumbi okubaleka angcono eYurophu.
Ukugqiba umsebenzi onzima, you will step into Dr. Ilabhoratri kaSteiner, kanye njengokuba wayeshiye 7o + kwiminyaka eyadlulayo. Injongo yakho iya kuba kukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kugqirha olihlwempu, kwaye kuya kufuneka uqokelele onke amandla akho kunye nobuchule ukusombulula le mfihlakalo kuphela 60 imizuzu. Ngokucacileyo, unokuzisa 2-3 amaqabane kwimishini, ke khumbula ukubhukisha kwangaphambili.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda usombulule ezona mfihlakalo zinkulu zehlabathi. Elinye lamagumbi okubaleka amnandi luhambo nje lukaloliwe kude nomzi wakho.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "I-12 yegumbi lokubaleka elilungileyo kwihlabathi" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fbest-escape-rooms-world%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)